February 2020 – Asian Harm Reduction Network (AHRN)
10/02/2020 by AHRN IT Posted in Activities, Home-Slider
ယနေ့ ၂၉-၁-၂၀၂၀ တွင် ရန်ကုန်တိုင်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ မောရဝတီလမ်း အမှတ် ၁၃၃ (က)တွင်ရှိသော အရိပ်စစ်အဖွဲ့၏ သင်တန်းခန်းမ၌ AHRN ၏ Strategic and Programmatic Advisor Mr. Willy De M‌aere မှ Training on Mental Health for Displaced Population ကို သင်ကြားပေးခဲ့ရာ AHRN Yangon ဝန်ထမ်းများမှ တက်ကြွစွာ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
Myanmar Humanitarian Fund မှ ငွေကြေး‌ထောက်ပံ့ပြီး AHRN အဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်လျက်ရှိသော အရိပ်စစ် အဖွဲ့ ၏ ပထမခြေလှမ်းမှာ စတင်ခဲ့လေပြီ။
ယနေ့ ၂၉-၁-၂၀၂၀ တွင် ရန်ကုန်တိုင်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ မောရဝတီလမ်း တွင်ရှိသော အရိပ်စစ်အဖွဲ့၏ သင်တန်းခန်းမ၌ AHRN ၏ Strategic and Programmatic Advisor Mr. Willy De M‌aere မှ Training on Mental Health for Displaced Population ကို သင်ကြားပေးခဲ့ရာ AHRN Yangon ဝန်ထမ်းများမှ တက်ကြွစွာ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
On 29th January 2020, Training on Mental Health for Displaced Population was conducted by Mr. Willy De Maere , Strategic and Programmatic Advisor, AHRN at Best Shelter Training Center which is situated in # 133 A, Mawyawaddy Street, Myangone Township.
This is the very first step of Best Shelter’s activities together with AHRN and it is funded by Myanmar Humanitarian Fund.
10/02/2020 by AHRN IT Posted in Activities
Donation of chicken boiled rice to patients and caregivers at Shwegu Towship Hospital